छ सिग्मा बनाउ ITIL | कुन सिगमा वा आईटीआईएल राम्रो छ? - आईटी टेक स्कूल
23 जुन 2017
छ सिग्मा बनाउ ITIL
ITIL र छ सि Sigma के हो?
ITIL र छ सिग्मा बीच विचलन
सूचना प्रविधि सहित प्रत्येक प्रशासन उद्योगको आवश्यकता छ कि उनीहरूले सेवाहरू उच्च क्षमताको हुन्। गुणस्तर व्यवस्थापन व्यवस्थापनको लागि, दुई रणनीतिहरू व्यापक रूपमा - आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी (आईटीआईएल) र छ सि Sigma प्रयोग गरिँदैछ। दुवैको आफ्नै बुँदाको रुचि छ। कुनै पनि अवस्थामा, धेरै संस्थाहरूले उनीहरूलाई दुई साथ प्रयोग गर्न तिरस्कार गर्छन्।
यो आईटीआईएल प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न आईटी प्रोफाईलहरूको लागि एक स्मार्ट सोच्ने हुनेछ जसले आईटीआईएल लागू गर्न सिङ्ग सिग्मासँग यसको फायदालाई समेट्नको लागि बुझाउनेछ। यस तथ्यको बावजूद तिनीहरूले विरोध गरेको छ, उनीहरूको बारेमा आधारभूत कुरा उपभोक्ता वफादारीमा जोड दिएका छन्। हामीलाई यहाँ विस्तार गर्न को लागी मौका दिनुहोस्।
आईटीआईएल एक आईटीआईएल हो जसले आईटी आधारित सेवाहरू पुर्याउन र वितरण गर्न प्रयोग गर्दछ। ITIL कार्यक्रममा थुप्रै भागहरू छन्। प्रशासन bolster परिवर्तन प्रबंधन, मुद्दा प्रबंधन, निर्वहन प्रबंधन, प्रकरण प्रबंधन र सेटअप शामिल व्यवस्थापन। प्रशासन वाहकले सीमा व्यवस्थापन, पहुँच व्यवस्थापन, मुद्रा सम्बन्धी प्रबन्ध, लाभ स्तर व्यवस्थापन र प्रशासन प्रगति व्यवस्थापन समावेश गर्दछ। यी खण्डहरु मध्ये प्रत्येक को केहि निर्धारित टेक्नोलोजीहरु र प्रथाहरु हो जो कि पूरी तरिका या विशेष रूप देखि गन सक्छ।
छ सि Sigma असाधारण रूप देखि संचालन को प्रक्रिया को लागि आईटी प्रबंधन को बाहिर को उपयोग को छ। यो औपचारिक दृष्टिकोणले तपाईंको व्यापारको लागि आवश्यक ढाँचाहरू आकलन गर्दछ, प्रक्रिया र यसको परिणाम बढाउने विधि र प्रक्रियाका लागि उपज प्रकृतिको उपाय विधि प्रयोग गर्दछ। यो आईटी लाभ व्यवस्थापन को विचार संग राम्रो तरिकाले मिश्रण गर्दछ र वित्तीय निवेश कोष को महत्व प्रदान गर्दछ। प्राथमिकता र उपभोक्ता वफादारी6छ सिग्माको मालिक भाग हुन्।
एक सामान्य अवस्था मा, आईटीआईएल र छ सिग्मा एक साथ वास्तविक अर्थ मा एक साथ उपयोग नहीं गरिन्छ। यो हुन सक्छ, तिनीहरू मिश्रण को भाग को रूप मा उपयोग को रूप मा एक विशाल डिग्री को व्यवसाय को बढावा प्रथाहरु को मानार्थ व्यवस्था को रूप मा।
छ सिग्मा गणना गर्न, सूत्रहरू र व्यापार फारमहरूको अनुसन्धानमा उनीहरूलाई बढावा दिनको अधिकांश भागको लागि। यो फारामहरू बढाउनको लागि सबैभन्दा कुशल तरिकामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, आईटीआईएलले प्रक्रियाको "के" को खोज गर्न आवश्यक परिकल्पना र नियमहरूसँग अधिक बोझ गर्दछ।
आईटीआईएल प्रविधिहरूले व्यवसायलाई के गर्न को लागी प्रविधि बढाउन को लागी थाहा पाउन सकिन्छ। कुन आशाको बावजूद छ, सि Sigma व्यवसायलाई एक मुद्दाको कारण निर्णय गर्न सक्षम गर्दछ वा प्रक्रिया खराब भयो। यो समयमा यो कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउँदछ। यसले सेवालाई अनावश्यक रूपमा मात्रामा पार्नको लागि एक दृष्टिकोण बनाउँछ। जब छ सिक्न सिग्माले मापन योग्य परीक्षण प्रयोग गर्दछ, यो परीक्षणको आधारमा अपग्रेड तयार गर्ने प्रयास भनेको आदर्श जाँच गर्न के लागी उपयुक्त छ।
विधिहरू सामेल गर्दै
निस्सन्देह, यी भेदभावका साथ पनि, यी दुई तरिकाहरू जब सामूहिक सम्झौताको बिन्दुहरू प्रस्तावमा सामेल भए। ITIL कुनै पनि मामला मा एक संगठन मा के गर्नु पर्छ कि निर्धारण गर्दछ, कसरी नहीं। यसैले, संस्थाको IT कमजोरीहरूले प्रक्रिया स्ट्रिमको निर्णय गर्न र निश्चित कार्य निर्देशनहरू आफैलाई निश्चित गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै गरी, सिग सिग्मालाई कसरी मुद्दाहरूको मुख्य चालक पत्ता लगाउन र तिनीहरूले कसरी बसाउन सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउँछन्। "कुन" र "कसरि" मूल्य परिवर्तनको निर्णय भयो, दुई विधिहरू सँगसँगै आईटीको स्वभावलाई सहयोग र संचारको फाइदा बढाउन।
छ सिग्मा को संगठनको वर्तमान प्रक्रियाहरु को परिवर्तन को एक भाग को रूप मा उपयोग गरिन सक्छ जुन अब आईटीआईएल ढाँचा को उपयोग को रूप मा या केवल यसलाई स्थानांतरित गर्न को लागी हो। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। त्यसो भए तपाईहरुका लागी तपाईहरुका बारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। ITIL-सही राज्य।
आईटीआईएल र छ सि Sigma को तरिका को रूप मा एक व्यवसाय को पूरा गर्न को लागि आवश्यक छ, आईआईएलआईएल6सि Sigma संग प्रशिक्षण को अतिरिक्त सहायक को प्रदर्शन हुनेछ। विशेषज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि यो छ सिक्न सिकाउने छ सिक्न सिग्मालाई ITIL राम्रो प्रक्रिया प्रदान गर्ने एक संगठनमा व्यवसायको उद्देश्यका उद्देश्यहरूसँग।
यो पनि हेर्नुहोस्: ITIL प्रमाणन क्यारियर अवसरों
ITIL परीक्षा 2017 को लागि नमूना प्रश्न र उत्तर